Ndị na-ebute OL 135 dị elu (681135-77-3) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / OL 135 (681135-77-3)
SKU: 681135-77-3. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gọọmentị nke usoro nchịkọta nke OL 135 (681135-77-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
OL135 bụ CNS penetrant, onye nwere ike ịmepụta ihe na-agbanwe agbanwe nke FAAH. Ọ na-egosipụta ọgwụ gbasara ọgwụ analgesic n'ụdị anụmanụ dịgasị iche iche na-enweghị ụkọ mberede nke metụtara kpọmkwem CBSNUMX agonism. Ọ na-eme ka ọrụ ahụ ike na ịṅụ ọgwụ na-eme ka ọ dịkwuo njọ.
I.OL 135 isi agwa:
aha: OL 135
II. Ihe ndi ozo banyere OL 135 Onye obula kwesiri imata:
2.How bụ ọrụ na OL 135 ?:
Echekwara OL-135 na -80 Celsius na ntụ ntụ, ruo mgbe 60 min tupu ule omume. A kwadoro doses atọ (0, 5.6, 10.0 mg / kg) na ụgbọala nke gụnyere 1: 1: ethanol 18, cremophor na saline. Ọchịchị ọgwụ ọjọọ na-amalite 30 nkeji tupu ọzụzụ (Nwale 1) ma ọ bụ ozugbo (n'ime 5 min) mgbe ọzụzụ (Nlee 2) site na ọgwụ intraperitoneal (IP).
A na-emezi nhazi na ụlọ anọ nke Malitefear na-eji "Freezing" software na-eji usoro eji ebipụta n'oge gara aga, na ntụgharị uche nke ejizi maka ndị okenye. Na nkenke, n'ụbọchị nke mbụ (ọzụzụ) e nyere minit ise nke ebe obibi nke 10 na 10-s 67-db 4-kHz na ụda 2-s 0.3-mA. N'ụbọchị nke abụọ (ihe a na-anwale n'ule) ka e zigara n'otu ụlọ nkwakọba ahụ dịka ụbọchị gara aga maka nkeji ise mgbe a na-atụle njiriji. N'ụbọchị nke atọ (akwụkwọ nyocha) a na-ebubata n'ime ụlọ ọhụrụ na-agbanye ọnọdụ na nke ọzọ. A na-enyocha ihe omimi n'oge ezumike nkeji ise nke na-esote ihe ngosi 10 nke akwụkwọ ndekọ ahụ mgbe a na-enyochakwa oyi. N'ọnọdụ ọ bụla, a na-akọwa gelịka dị ka enweghi ihe ndị na-emechi oghere dị n'okpuru ọnụ ụzọ nchebe maka 0.5s. Nzọụkwụ ahụ kpebisiri ike n'ọmụmụ ihe pilot site n'aka onye nyocha nke a zụrụ iji chọpụta nzaghachi freezing. A na-agbakọta ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ nkeji iri site na iji oge tụnyere oge mgbagwoju anya na oge zuru ezu maka ihe omume ọ bụla, gụnyere ịzụta ihe niile 10 ụda.
Iji jide n'aka na mmetụta nke ọgwụ ahụ nọ na-atụ egwu ma ọ bụghị ihe ndị na-akpata antinociceptive, anyị na-enyochakwa reactivity na mkpali nsogbu ahụ, ma dị ka ọnụ ahịa dị oke ọnụ na dịka ọnụ ahịa dị ala. N'etiti isiokwu otu ụzọ ANOVA nke ọgwụ dose ọgwụ na oke ma ọ bụ ụzarị mmeghachi omume na-ahụghị ọdịiche dị iche.
3.Gịnị bụ mmetụta na OL 135?
FAAH Onye na-eme ihe n'eziokwu OL-135 na-akpaghasị nnweta ahụ, ma ọ bụghị nkwado, nke egwu egwu egwu.
 Mgbochi egwu egwu na ihe ijuanya reactivity anọgideghị na-emetụta ya.
● N'ikpeazụ, data ndị a na-atụ aro otu ọrụ maka endocannabinoids na mpaghara nke egwu atụ egwu.
Onye na-emechi ihe na-eme ka abụba fatty acid amide hydroharse (FAAH) na-eme ka OL135 gbanwee mechanic allodynia na ụbụrụ na-agwọ ọrịa akwara (SNL) na ụdị mmerụ ahụ (MTI). Mbibi nke enzyme na-abaghị uru fatty acid amide hydrolase (FAAH) na-eme ka ihe ịrịba ama dị mma ma nwee ike ịmepụta nrụpụta yiri nke ahụ na-enweghị mmetụta utịp. Nnyocha a na-amụ ugbu a mere nchọpụta banyere nsonaazụ (5.6 mg / kg) ma ọ bụ usoro ọgwụ (10.0 mg / kg) doses nke OL-135 (onye na-egbochi FAAH) na ịchụ na nsonye nke egwu egwu egwu, nke bụ ihe a na-emekarị ihe na-echegbu onwe ya. Ọdịdị nke OL-135 na-ebibi ihe dị iche iche ma na-atụ egwu ịtụ egwu. Enweghị mmeghachi omume mmetụta. N'ihi mgbokọta eletrik ndị ọzọ chọrọ site na gburugburu ya, ma ọ bụghị nyocha, egwu egwu, data ndị a na-egosi na njigide endocannabinoid n'èzí nke amygdala nwere ike ịbụ ihe dị oké mkpa maka nchekwa nke egwu. Ihe dị elu nke ụbụrụ ụbụrụ anandamide (350 pmol g (-1) na njikwa 60 pmol g (-1) nke a na-emeso ụgbọala na ụbụrụ nke oke na-enye OL135 (20 mg kg (-1) ip. Minit 15 tupu injection intone nke 20 mg / kg (-1). Cannabinoids. 3 Brain FAAH chebere site n'iji arụkọ ọrụ na-enweghị ike imebi na oke oke (135-2 mg kg (-60) ip) 1 nkeji tupu ochichi nke onye na-agbagha FAAH (URB30: 597 mg kg (-0.3) intracardiac). Nlekọta nchebe nke enzyme metụtara njikọ nke OL 1 n'otu ụbụrụ ahụ. Na 135 min mgbe ị kwadoro, 30OL4 (135 mg kg (-100) ip) belata oke allodynia (MPE) nke MTI na-arụ ọrụ na FATI (+ / +) ụmụ (a tụrụ na von Frey filaments). 1%, ma enweghi mmetụta na FAAH (- / -) ụmụ oke. 50 OL5 nchịkọta ip rụpụtara ntụgharị mgbanwe nke ntụgharị mechanical allo n'etiti ED (135) n'etiti 50 na 6 mg kg (-9) na ụdị MTI na SNL. Ncheta plasma nke ED (1) na ụdị abụọ ahụ bụ 50 microM (0.7 ng ml (-240)). N'ime akara SNL, onye nlekọta ngalaba nke CB1 (2 mg kg / kg OL144528) na-egbochi OL 5-induced mechanical allodynia inversion Otú ọ dị, Nhọrọ CB (1) ) onye na-emegide ọrịa SR20A (135 mg / kg (ip)) adịghị arụ ọrụ. N'ime ụdị MTI, ụbụrụ abụọ a na-akpọta, SR135A ma ọ bụ SR1 (ma e nyere 141716 mg kg (-5) n'ime mkpịsị aka) ma ọ bụ na OL 141716 (144528 mg / kg), gbochiri mgbe 5 minit nke nyochaghachi Reversal dose nke mechanic allodynia. 1IN Ụdị MTI na ụdị SNL, naloxone (135 mg kg (-20), 30 min mgbe OL8 ga-agbaghasị analgesia (1% nke nchịkwa akara na MTI nlereanya, na SNL). OL 1 na-enye.
6. Ntuziaka OL 135:
IV. Esi zụta OL XUMUM si AASraw?
1 nyochaa maka OL 135 (681135-77-3)
OL 135 ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi